Lady in Red/ အမေစုရဲ့ ပန်းချီကားတချပ် – Chuu Wai Nyein
HomeblogsLady in Red/ အမေစုရဲ့ ပန်းချီကားတချပ်
Lady in Red/ အမေစုရဲ့ ပန်းချီကားတချပ်
By Chuu Wai Nyein. Posted on October 10, 2021
🌹🌹 ဘယ်တုန်းကမှ မပေါ်ပေါက်ခဲ့ဖူးတဲ့ အမေစုရဲ့ ပန်းချီကားတစ်ချပ် 🌹🌹
ပန်းချီဆွဲလာတဲ့ ၁၂နှစ်ကျော် အတွင်း ဒီပန်းချီကားဟာ အမေစုပုံပါတဲ့ “ပထမဆုံး“ ပန်းချီကား တချပ်ဖြစ်လာပါတယ်။ “ပထမဆုံး“ ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်း ကတော့ အမေစုပုံကို ပန်းချီစတင်ရေးဆွဲကတည်းက ရေးဆွဲဖို့ အာသီသရှိခဲ့ပေမယ့် မိမိရဲ့ အကောင်းဆုံး လက်ရာ၊ မိမိရဲ့ အကောင်းဆုံး အတွေး၊ ပန်းချီဆရာယောက်ရဲ့ စိတ်ကူးပုံဖော်မှု၊ လက်ရာပိုင်နိုင် ကျွမ်းကျင်မှု ဒါတွေအတွက် စိတ်ရှည်ရှည် အချိန်ယူခဲ့တဲ့အတွက် ဒီနေ့ ဒီရက်မှာမှ ဒီပန်းချီကားကို ရေးဆွဲဖို့ စိတ်ကူး၊ ပညာကျွမ်းကျင်မှု၊ ဖန်တီးမှု၊ အသိပညာတွေ နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး နှစ်တွေ အတော်ကြီးကြာမှ ဖန်တီးရေးဆွဲပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရပါတယ်။
များသောအားဖြင့် အမေစုပုံကို ဓါတ်ပုံနဲ့တူသော ပုံတူပန်းချီကားတွေပဲ အားလုံးနီးပါးဆွဲကြလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီပန်းချီကားကိုတော့ အမေစု ဘယ်တုန်းကမှ ရိုက်ယူထားခြင်းမရှိတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ ပန်းချီဆရာယောက်ရဲ့ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းနဲ့ စိတ်ကူးဉာဏ်ကို ပေါင်းစပ်ပြီး ရေးဆွဲဖို့ ခံစားဈာန်ဝင်ခဲ့တယ်။
ဒီနှစ်၊ ဒီအချိန်မှာ ဒီပန်းချီကားရေးဆွဲဖို့ စိတ်မှာ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကတည်းက ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှု၊ တပါးသူအတွေးရဲ့ လွှမ်းမိုးမှု နောက်ပြီး social media ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုတွေ မပါအောင်၊ ၁လနီးပါးလောက် facebook နဲ့ရော၊ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပါ အဆက်သွယ်ဖြတ်ပြီး တကိုယ်တည်းတွေး၊ တကိုယ်တည်း အချိန်ယူ တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ပန်းချီကားတချပ်ပါ။ အမေစုအပေါ် ထားရှိတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အမြင်၊ ကိုယ့်ရဲ့ အတွေးကို တယောက်တည်း ခံစားရင်း ရေးဖွဲထားပါတယ်။ ကိုယ်တယောက်တည်းရဲ့ အတွေးဆိုပေမယ့် ခံစားမှု ကိုက်ညီတဲ့သူတွေနဲ့ ဆုံတဲ့အခါ မျှဝေခံစားနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။
ပန်းချီဆွဲတုန်းက ကိုယ့်ရဲ့ အတွေးကမ္ဘာလေးထဲကို ခဏအလည်သွားကြည့်ရအောင်!
🌹-အမေစုရယ်လို့ တွေးလိုက်တာနဲ့ ကျန်တဲ့အရာတွေထက် ပထမဆုံးပေါ်လာတာက စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှု၊ နောက်မဆုတ်တဲ့ ဇွဲနဲ့ အနစ်နာခံနိုင်ခြင်းပါပဲ။ ဒါတွေကို ပန်းချီကားတချပ်တည်းမှာ ထည့်ဖို့ စိတ်ကူးလိုက်တဲ့အခါ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းပြီး ချွန်မြနေတဲ့ စူးညောင့်အပြည့်နဲ့လမ်းမှာ ခြေဗလာနဲ့ တည်ငြိမ်စွာ လမ်းလျှောက်နေခြင်းက ပထမဆုံးအတွေးဖြစ်ခဲ့တယ်။
🌹-လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ အမေစုအကြောင်းကို စဉ်းစားမိရင် စာဖတ်ခြင်းနဲ့ ပညာဗဟုသုတကို ချန်ထားပြီး တွေးကြည့်လို့ကို မရဘူး။ ဒါကြောင့် စာအုပ်ပါမှကို ဖြစ်မယ်။ စာအုပ်တွေ အများကြီး ထည့်ချင်ပေမယ့် ပန်းချီရဲ့ composition ရှုထောင့်အရ ၃အုပ်က အလှဆုံး အနေအထားဖြစ်လို့ စာအုပ်၃အုပ်ထည့်လိုက်တယ်။
🌹-ချန်ထားလို့ မရတဲ့ ဒီမိုကရေစီအတွက် ကြိုးစားမှုတွေထဲမှာ ဘယ်အရာကို အဓိကအရာအဖြစ် ဖော်ပြမှာလဲ? ဘယ်အရာတွေကို ရည်ညွှန်းချင်လဲလို့ တွေးလိုက်တဲ့အခါ . . . . . ရွှေရောင်ချိန်ခွင်လေးနဲ့ ချိုးဖြူလေးတွေ (7 ဂဏ္ဏန်းကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ နံပတ်လေးမို့) ထည့်ချင်လာတယ်။ ဒါက လူတိုင်း လွယ်ကူစွာခံစားနိုင်မယ့် လှပတဲ့ သင်္ကေတလေးတွေပေါ့။
🌹-အလံလေးကတော့ ဘယ်ချန်ထားခဲ့လို့ ဖြစ်မလဲ? အကောင်းဆုံး ပန်းချီကားဖွဲ့စည်းမှုတည်ဆောက်ပြီး ထည့်ကိုထည့်မှ ပြည့်စုံမယ်။
🌹-ရွှေရောင်ကတော့ အားလုံးရဲ့ရွှေနိုင်ငံမြန်မာပြည်နဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံး အရောင်ပါပဲ။
🌹-ပန်းချီကားထဲမှာ ရွှေနိုင်ငံရဲ့ ရွှေအလင်းကို အမှောင်ကိုခွင်းပြီး ယူဆောင်ခဲ့လိုက်တယ်။ အပြင်ဘဝလက်တွေ့မှာ ဘယ်လိုတွေ ခက်ခဲမလဲ မသိပေမယ့် ပန်းချီကားထဲမှာတောင် ၃ခါလောက် ပြင်လိုက်ရတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ စိတ်ကြိုက်အဖြစ်ဆုံး ရွှေအလင်းလေးကို ယူဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။
🌹🌹🌹ပန်းချီကားလေးက ပြီးသွားပြီးလား? ဘာကျန်သေးလဲဆိုတော့
-ပျံံ့လွင့်နေတဲ့ အဖြူရောင်ပိတ်စလေးထဲမှာ မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားရတဲ့ အရာကို စာသားလေးတွေ အဖြစ်ရေးခွင့်ရရင် သင်ရော ဘာတွေရေးမလဲ ၊ ညစ်ထေးထေးနဲ့ ခြေနင်းဘက်ထဲလိမ့်နေမယ့် ခရမ်းရင့်ရောင် ပိတ်စထဲက စကားလုံးတွေကရော ဘာတွေ ဖြစ်မလဲ?
ဒါတခုကိုတော့ ပန်းချီလေးကို ကြည့်ပြီးခံစားမယ့်သူတွေရဲ့ အတွေး တံတားပေါက်ကို ဖွင့်ဖို့ ချန်ထားခဲ့တယ်။🌹🌹🌹
ကိုယ်ယုံကြည်ရာကိုယ်ဖန်တီးပြီး ဘယ်သူကိုမှ တိုက်ခိုက်ထိခိုက်ဖို့ စိတ်ကူးလုံးဝမရှိတဲ့အတွက် အရမ်း အထအနကောက်ပြီး တွေးတတ်လွန်းသူတွေရဲ့ ရန်ကလဲ လွတ်လွတ်ကင်းကင်းဖြစ်အောင်၊ ပန်းချီကားရဲ့ ကာလာဟာမိုနီနဲ့လဲ ကိုက်အောင် အမှောင်အဖြစ်သုံးတဲ့ ခရမ်းရောင်ကို ပြန်သုံးဖြစ်ခဲ့တယ်။
ဒီလို အတွေးကမ္ဘာလေးပြီးတော့ နှစ်ရှည်လများ အချိန်ယူခံစားခဲ့တဲ့ စိတ်ကူးပန်းချီကားလေးကတဆင့် တကယ့် ပန်းချီကားအစစ်တချပ် ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ လူငယ်ပန်းချီဆရာတယောက်ရဲ့ ဖန်တီးမှုအတွေးနဲ့ နိုင်ငံံ့အရေးပါဝင်ပတ်သတ်မှုတခုရဲ့ ကိုယ်ပိုင် မှတ်တိုင်လေးတခု ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့လဲ ယုံကြည်တယ်။
🌹ပန်းချီကားအရွယ်က အားပါးတရဆွဲထားလို့ တော်တော်လေး ကြီးပါတယ်။ ကားနောက်ခန်းထဲမှာ လူမထိုင်ဘဲထည့်ရလောက်အောင်ကြီးတယ်။
Size – 4×3 ft (122×91 cm)
🌹နောက်တခုကတော့ အမေစု ရုပ်ပုံကို ကိုယ်အကျိုးစီးပွားအတွက် ရေးဆွဲရောင်းချပြီး အသုံးမချချင်တာကြောင့်လဲ ဒီလောက် အချိန်တွေ အကြာကြီးမှာ ပန်းချီကားတချပ်ပဲ ရေးဆွဲဖြစ်ခဲ့တာလဲပါတယ်။ အမေစုပုံကို ဆွဲရင် အင်မတန်ရောင်းရလွယ်ပါတယ်။ တော်ရုံလက်ရာ အသင့်အတင့်ရှိတဲ့ ကားတောင်း ရောင်းရလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီအချိန်အတောအတွင်းမှာ ငြင်းဆန်ခဲ့ရတာတွေလဲ ရှိခဲ့တယ်။ ငွေကြေးကြပ်တည်းပြီး ရပ်တည်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့ ပန်းချီဆရာဘဝအစက အမေစုပုံတူ ကမ်းလှမ်းမှုတွေကိုလဲ ငြင်းခဲ့မိတယ်၊ လူမှုကူညီရေးအတွက် လုပ်ခဲ့တဲ့ စုပေါင်းပွဲတွေကိုလဲ ငေးရုံပဲငေးမပါဝင်ခဲ့ရတာတွေလဲ နှစ်တိုင်း ခဏခဏ ရှိခဲ့တယ်။
အခုပန်းချီကားလေးကိုလဲ ရောင်းချပြီး ကိုယ်တယောက်တည်းအတွက် အကျိုးခံစားဖို့ လုံးဝစိတ်ကူး မရှိပါဘူး။ ပန်းချီဆရာအဖြစ်အသက်မွေးပြီး ပန်းချီဆက်ဆွဲဖို့ တခြားနည်းတွေနဲ့ ကြိုးစား ရပ်တည်နေဦးမယ် ဆိုပေမယ့် ဒီအမေစုရဲ့ ရုပ်ပုံမှုရင်းပန်းချီကားလေးကတော့ ဒီအစီစဉ်ထဲမှာ အသုံးချဖို့ မျှော်လင့်ချက် ကင်းစင်စွာပဲ ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။
ပန်းချီကားတိုင်းက လူလေးတယောက်ချင်းစိီလိုပဲ ဘဝလေးတွေ ရှိတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်မွေးထုတ်လိုက်တဲ့ ဒီပန်းချီကားလေးက ဘယ်သူ့လက်ထဲကို ရောက်မယ်၊ ဘယ်နံရံမှာ ချိတ်ဆွဲမယ်၊ ဘာတွေ ဖြစ်လာဦးမယ်၊ ဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရင်ခုန်နေရင်း ရလာတဲ့ ပီတိဓါတ်တွေကို အားလုံးနဲ့ အတူမျှဝေ လိုက်ပါတယ်။
PREVIOUSCreativity ကောင်းတွေ ရစေမယ့် အလုပ်နေရာ ပြင်ဆင်ခြင်း
NEXTFacebook နဲ့ Social media အဆိပ်အတောက်ဖြေခြင်း
မြန်မာ့ အမျိုးသမီး ပန်းချီပညာရှင်များကိုလည်း တန်ဖိုးထားကြပါ
Facebook နဲ့ Social media အဆိပ်အတောက်ဖြေခြင်း
Creativity ကောင်းတွေ ရစေမယ့် အလုပ်နေရာ ပြင်ဆင်ခြင်း
FIFDH Jury Member
Human Rights Day in Luxembourg
Southeast Asia Sounds & Images